Kulan looga hadlayay Xanaanada Xoolaha oo lagu qabtay Muqdisho “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kulankii wada tashiga ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee Xukuumadda Federaalka ah iyo Wasaaradaha Xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Federaalka oo ay soo qaban qaabisay Wasaarada Xanaanada ee dowladda Soomaaliya oo kaashaneysa Midowga Yururb, Midowga Afrika iyo hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cunada iyo beeraha ee FAO oo laba maalin socday ayaa lagu soo gaba gabeeyay magaalada Muqdisho.
Shirkan oo sidoo kale ay ka qeyb galeen guddiga kheyraadka ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Dhaqaatiir ayaa intii uu socday waxa ay ka qeyb galayaasha kaga hadleen horumarinta Xanaanada Xoolaha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen iyo sidoo kale arrimo ay ka mid yihiin dulmarka siyaasada Qaran ee Xanaanada Xoolaha, iyadoo maantana la dhageystay talooyinka wakiilada ka socday maamul goboleedyada.
Ugu horeyn Agaasimaha guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ,dhirta iyo daaqa ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar ayaa sheegay in shirka laga soo saray war-murtiyeed ay ku dhanyihiin intii ka qeyb gashay.
Wasiirka Xanaanada xoolaha ee dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Madoobe Nuunow Maxamed oo ku hadlayay magaca Wasiirada Xanaanada Xoolaha ee ka socday dowlad Goboleedyada ayaa balan qaaday in qodobadii kulanka kasoo baxay ay u fulin doonnaan sidii loogu talo galay.
Guddoomiyaha guddiga kheyraadka ee Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Saciid Maxamed Cali ayaa uga mahad celiyay Wasaarada Xanaanada Xoolaha Soomaaliya qaban qaabinta kulanka iyo qodobadii kasoo baxay geba gabadiisa.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha Dhirta iyo daaqa ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mudane Siciid Xuseen Ciid oo kulanka soo xiray ayaa u mahad celiyay Wasiirada ka socday dowlad goboleedyada, isagoo sheegay in kulamada kan xiga lagu qaban doono magaaloyinka dowlad goboleedyada.
Kulankan ayaa labadii maalin ee ugu dambeysay waxaa uu ka socday magaalada Muqdisho waxa diirada lagu saaray horumarinta iyo qorshaha xanaanada xoolaha Soomaaliya, waxaana tani ay qeyb ka tahay qorshe lagu horumarinayo Xanaanada Xoolaha Soomaaliya oo ay wado Wasaaradda Xanaada Xoolaha Dhirta iyo Daaqa ee Soomaaliya.